လူငယ်စမ်းရေ: NAD + & NMN ကိုဖြည့်စွက်ရမည်
/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/“ လူငယ်အရင်းအမြစ်” - NAD + & NMN ကိုနောက်ဆက်တွဲအဖြစ်
အပေါ် Posted 03 / 03 / 2021 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
သတင်းစာနှင့်မဂ္ဂဇင်းခေါင်းစဉ်များအရ NMN ဖြည့်စွက်ချက်သည် NAD အား NAD ကိုမည်သို့သက်ရောက်စေကြောင်းသိပ္ပံနည်းကျတွေ့ရှိချက်များထုတ်ပြန်ခြင်းသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကို“လူငယ်၏စမ်းရေတွင်း။ "
လေ့လာမှုအရကြွက်များဟောင်းသည်ပေါင်းစပ်သောအခါငယ်ရွယ်။ အားတက်လာပြီးပိုမိုပါးလွှာလာသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ဖြည့်စွက်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏အိုမင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြောင်းပြန်နိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ဆရာဝန်နှင့်အတူမည်သည့်ဖြည့်စွက်ယူပြီးဆွေးနွေးရန်သင့်သော်လည်း။
HisNMN နှင့် NAD + ၏ tory
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအရေးကြီးဆုံးနှင့်စွယ်စုံမော်လီကျူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆဲလ်များကိုစွမ်းအင်ပေးရာတွင်အဓိကကျသောကြောင့် NAD မလိုအပ်သောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်မရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် NAD သည်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာသုတေသနများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြုလုပ်သည်။
၁၉၀၆ တွင် Arthur Harden နှင့် William John Young တို့ကဘီယာထုတ်လုပ်သည့်တဆေးမှထုတ်ယူသောအရည်တွင်“ အချက်” တစ်ခုအားတွေ့ရှိသောအခါသကြားဓာတ်ကိုအရက်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ထိုအချိန်က“ coferment” ဟုခေါ်သော“ အချက်” ကို NAD ဟုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။
ဟာဒင်သည် Hans von Euler-Chelpin နှင့်အတူကစော်ဖောက်ခြင်း၏နက်နဲသောအရာများကိုလည်းခွဲထုတ်ခဲ့သည်။ သူတို့က ၁၉၂၉ ခုနှစ်တွင်နိုဘယ်ဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်များအားဓာတုပုံသဏ္andာန်နှင့်မကြာမီ NAD ဟုလူသိများလာမည့်ဂုဏ်သတ္တိများအပါအ ၀ င်ထိုဖြစ်စဉ်များကိုအသေးစိတ်နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။
NAD ၏ဇာတ်လမ်းသည် ၁၉၃၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်းကျယ်ပြန့်စွာကျယ်ပြန့်စွာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး၊ အော့တိုဝါ့ဘ်ဘား၏နောက်မှနိုဘယ်ဆုရှင်တစ် ဦး ၏လမ်းညွှန်မှုဖြင့်ဇီဝဓာတုဗေဒဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန် NAD ၏အဓိကအခန်းကဏ္discoveredကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Warburg က NAD သည်အီလက်ထရွန်များအတွက်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ relay တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အီလက်ထရွန်များအားမော်လီကျူးတစ်ခုမှအခြားတစ်ခုသို့လွှဲပြောင်းပေးခြင်းသည်ဇီဝဓါတုဗေဒဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများအားလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်စွမ်းအင်အတွက်အခြေခံဖြစ်သည်။
၁၉၃၇ ခုနှစ်တွင် Conrad Elvehjem နှင့် Wisconsin တက္ကသိုလ်မှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် NAD + ဖြည့်စွက်စာသည် pellagra ၏ခွေးများသို့မဟုတ်“ အနက်ရောင်လျှာ” ကိုပျောက်ကင်းစေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ လူသားများတွင် pellagra သည်ဝမ်းရောဂါ၊ စိတ်ဖောက်ပြန်မှုနှင့်ပါးစပ်အတွင်းအနာစသည့်ရောဂါလက္ခဏာများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည် niacin ချို့တဲ့မှုမှထွက်ပေါ်လာပြီးယခု NMN ၏ရှေ့ပြေးတစ်ခုဖြစ်သောနီကိုတင်းနိုက်နှင့်မှန်မှန်ကုသသည်။
အသက် (၄၀) နှင့် (၅၀) အတွင်းရှိ NAD + ကိုအာသာကော်နက်ဘာ့ဂ်မှသုတေသနပြုခြင်းက DNA အတွက်ပုံတူပွားခြင်းနှင့် RNA ကူးယူခြင်း၏အခြေခံသဘောတရားများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် Jack Preiss နှင့် Philip Handler တို့သည်ဇီဝဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအဆင့်သုံးဆင့်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းကိုနီကိုတင်းအက်ဆစ်ကို NAD သို့ပြောင်းလဲလိုက်သည်။ ဒီလမ်းကြောင်းကိုခေါ်တဲ့ဒီအဆင့်ဆင့်ကိုယနေ့ Preiss-Handler Pathway လို့လူသိများတယ်။
၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် Chambon, Weill နှင့် Mandel တို့က nikotinamide mononucleotide (NMN) သည်အရေးပါသောနျူကလီးယားအင်ဇိုင်းကိုအသက်ဝင်စေရန်လိုအပ်သောစွမ်းအင်ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိမှုက PARP လို့ခေါ်တဲ့ပရိုတင်းတစ်မျိုးကိုထူးခြားတဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေအတွက်လမ်းခင်းပေးခဲ့တယ်။ PARPs များသည် DNA ပျက်စီးမှုကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်၊ ဆဲလ်သေခြင်းကိုထိန်းညှိရန်နှင့်သက်တမ်းအပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်နွယ်သောလုပ်ဆောင်မှုများတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။
၁၉၇၆ တွင် Rechsteiner နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် NAD + သည်နို့တိုက်သတ္တ ၀ ါများ၏ဆဲလ်များတွင်စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုမော်လီကျူးတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်း၏ဂန္ဓာတုဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ beyond ထက် ကျော်လွန်၍“ အချို့သောအဓိကလုပ်ဆောင်ချက်” ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟူသောခိုင်လုံသောအထောက်အထားများတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Leonard Guarente နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် sirtuins ဟုခေါ်သောပရိုတိန်းများသည် NAD ကို အသုံးပြု၍ အချို့သောဗီဇများကို“ တိတ်ဆိတ်စွာ” ထားခြင်းဖြင့်သက်တမ်းတိုးရန်အတွက်၎င်းရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ NAD နှင့် ၄ င်း၏အလယ်အလတ်တန်းစား NMN နှင့် NR တို့တွင်သက်ဆိုင်သည့်ကျန်းမာရေးပြhealthနာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်နိုင်သည့်အတွက်တိုးများလာခဲ့သည်။
Wဦး ထုပ်အစားအစာများတွင် NMN ပါ ၀ င်သလား။
NMN သည်သဘာဝအားဖြင့်ထောပတ်သီး၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ယခုသင်စဉ်းစားမိနိုင်သည် -“ အကယ်၍ NMN ကိုအစာ၌တွေ့ရှိပါကထိုအစားအစာများကိုပိုမိုစားသုံးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ် NAD + အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်မည်လား။ “ ဒါကမေးခွန်းကောင်းတခုပါ။ ကျန်းကျန်းမာမာအစားအစာစားဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီမှာပြtheနာပါ
NMN သည်ဤအစားအစာများတွင်ဖြစ်သော်လည်းအစားအစာတစ်ကီလိုလျှင် ၁ မီလီဂရမ်အောက်သာရှိသည်။ တစ်နည်းပြောရရင် NMN ၁ မီလီဂရမ်လောက်ရဖို့ဆိုရင်မင်းကပန်းဂေါ်ဖီ ၁ ကီလိုလောက်စားရမယ်။
လူသားများတွင် NAD + ပိုမိုမြင့်မားစေရန် NMN ပမာဏသည်တစ်စက္ကန့်တွင်မီလီဂရမ်ရာဂဏန်းရှိသင့်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့မည်မျှစားသုံးသည်ဖြစ်စေပန်းဂေါ်ဖီမည်မျှပင်ရှိပါစေ၊ အစားအစာမှရရှိသောအရာထက်များစွာမြင့်မားပါသည်။
AASraw သည် NAD + & NMN ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့် NMN နှင့်အတူဖြည့်စွက်?
ကျွန်ုပ်တို့ပြသထားသည့်အတိုင်း NMN ကိုဖန်တီးရာတွင် NMN သည်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် NAD + မြင့်မားပါကဆဲလ်စွမ်းအင်တိုးလာပြီး၎င်းသည်ဘဝလောင်စာဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာရှိကိုယ်တွင်းရှိကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်ဆဲလ်အားလုံးကိုစွမ်းအင်နှင့် DNA ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ပေးသည်။ NAD + သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အိုမင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှေးကွေးစေခြင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော Sirtuins များကိုလည်းလုပ်ဆောင်သည်။
NMN ဖြင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ NAD + အဆင့်များကိုတိုက်ရိုက်တိုးပွားစေသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှသဘာဝကျဆင်းမှုကိုတန်ပြန်စေသည်။ သုတေသနအနေဖြင့် NMN ကိုဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည် NAD + အဆင့်ဆင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင်အသက် (၂၀) ​​အရွယ်သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။
(1) Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD +) ဆိုတာဘာလဲ နှင့်၎င်း၏အလုပ်?
NAD + သည်အသက်နှင့်ဆယ်လူလာလုပ်ငန်းများတွင်လိုအပ်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစုစပ်ဖြစ်သည်။ အင်ဇိုင်းများသည်ဓာတ်ကူပစ္စည်းများဖြစ်သည့်ဇီဝဓာတုဓာတ်ပြုခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Coenzymes များသည်အင်ဇိုင်းများအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သော“ အထောက်အမ” မော်လီကျူးများဖြစ်သည်။
NAD + သည်ရေ မှလွဲ၍ ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းအပေါများဆုံးမော်လီကျူးဖြစ်ပြီး၎င်းမရှိဘဲသက်ရှိတစ်မျိုးသည်သေရမည်။ ပျက်စီးနေသော DNA ကိုပြုပြင်ပေးသည့် sirtuins ကဲ့သို့သော NAD + ကိုခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်ရှိပရိုတင်းများစွာကအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ဆဲလ်များ၏အင်အားကြီးမားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အသုံးပြုသည့်ဓာတုစွမ်းအင်ကိုထုတ်လုပ်သော mitochondria များအတွက်လည်းအရေးကြီးသည်။
(2) NAD + အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ဖို့နည်းလမ်းများ
ပိုကောင်းသောကယ်လိုရီကန့်သတ်ချက်ဟုလူသိများသည့်ကယ်လိုရီစားသုံးမှုကိုအစာရှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လျှော့ချခြင်းသည် NAD + level နှင့် sirtuin လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ ကြွက်များတွင် NAD + နှင့် sirtuin လှုပ်ရှားမှုသည်ကယ်လိုရီကန့်သတ်ချက်မှအိုမင်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုနှေးကွေးစေသည်။ NAD + သည်အချို့သောအစားအစာများတွင်ပါ ၀ င်သော်လည်း၊ NMN ကဲ့သို့ဖြည့်စွက်ဆေးများကို NAD + level တိုးမြှင့်စေကြောင်းပြသခဲ့သည်။
(3) NAD ++ NMN အဖြစ်ဖြည့်စွက်
ပုံမှန်ဆယ်လူလာလုပ်ငန်းဆောင်တာများအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ NAD + ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအားကုန်သွားသည်နှင့်အမျှ NAD + ၏အတွင်းပိုင်းဆဲလ်ပြင်းအားသည်အိုမင်းခြင်းမှကျဆင်းခြင်းဖြစ်သည်။ NAD + ၏ကျန်းမာသောအဆင့်များကို NAD + ရှေ့ပြေးများဖြင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ပြန်လည်တည်ထောင်နိုင်သည်ဟုယူဆကြသည်။ သုတေသနအရ NMN နှင့် နီကိုတင်းနိုက်ရိုင်ဘိုဇိုင်း (NR) ကို NAD + ထုတ်လုပ်မှု၏ဖြည့်စွက်မှုအဖြစ်ရှုမြင်ပြီး၊ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှ NAD + သုတေသီဒေးဗစ်စကင်ကလတ်က“ NAD + ကိုသက်ရှိတွေကိုတိုက်ရိုက်ကျွေးမွေးတာနဲ့စီမံခန့်ခွဲတာဟာလက်တွေ့ကျတဲ့ရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ။ NAD + မော်လီကျူးသည်ဆဲလ်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ရန်ဆဲလ်အမြှေးပါးများကိုအလွယ်တကူမဖြတ်နိုင်သဖြင့်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုအပြုသဘောသက်ရောက်စေသည်။ အဲဒီအစား, NAD + မှရှေ့မော်လီကျူးများ NAD + ၏ဇီဝရရှိနိုင်အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ဖို့အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ " ဆိုလိုသည်မှာ NAD + ကိုတိုက်ရိုက်အနေဖြင့် အသုံးပြု၍ မရပါ နောကျဆကျတှဲအဲဒါကိုအလွယ်တကူစုပ်ယူမထားလို့ပဲ။ NAD + ရှေ့ပြေးများသည် NAD + ထက်ပိုမိုလွယ်ကူစွာစုပ်ယူနိုင်ပြီးပိုမိုထိရောက်သောဖြည့်စွက်ဆေးများဖြစ်သည်။
နီကိုတီနိုက်မွန်နွန်ကူလိုတိတ် (CAS:1094-61-7) NMN ဟုလည်းခေါ်သည်။ ၎င်းသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိပမာဏအနည်းငယ်မျှသာပါဝင်သောသဘာဝအရဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ NMN သည်နှုတ်ဖြင့် bioavailable ဖြစ်ပြီးနှုတ်ဖြင့်ခေါ်ယူသောအခါအသည်းနှင့်ကြွက်သားတစ်သျှူးအတွင်းရှိ NAD + အဆင့်ကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်။
စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု၊ သိမြင်မှုကျန်းမာရေးနှင့်အရိုးနှင့်အရိုးကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ကြောင်းမကြာသေးမီကသုတေသနပြုချက်အရသိရသည်။ NMN သုတေသန၏အထူးစိတ်ဝင်စားစရာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုမှာ၎င်းသည် DNA ပြုပြင်ခြင်းကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ကျန်းမာသောအိုမင်းမှုတွင်အခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သော SIRTUIN မျိုးဗီဇများကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေခြင်းဖြစ်သည်။
※ NMN ကိုကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းမည်သို့ဖန်တီးသည်။
NMN ကိုခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဗီတာမင်ဘီမှထုတ်လုပ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း NMN ပြုလုပ်ရန်တာဝန်ရှိသည့်အင်ဇိုင်းကိုနီကိုတင်းနိုက်ဒီဖော့စဖရိုရစ်စ်စထရပ်စ်ဆာဆာ (NAMPT) ဟုခေါ်သည်။ NAMPT သည် nikotinamide (ဗီတာမင် B3) ကို PRPP (5'-phosphoribosyl-1-pyrophosphate) ဟုခေါ်သောသကြားဖော့စဖိတ်နှင့်တွဲထားသည်။ NMN ကို 'nikotinamide riboside' (NR) မှဖော့စဖိတ်အုပ်စုတစ်ခုမှလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
NAMPT သည် NAD + ထုတ်လုပ်မှုတွင်နှုန်းကန့်သတ်သောအင်ဇိုင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ NAMPT အကြောင်းတရားနိမ့်နိမ့် NMN ထုတ်လုပ်မှုကိုကျဆင်းစေ။ NAD + အဆင့်နိမ့်သည်။ NMN ကဲ့သို့ရှေ့မော်လီကျူးများထည့်ခြင်းသည် NAD + ထုတ်လုပ်မှုကိုမြန်စေသည်။
NMN သည်တိရိစ္ဆာန်များ၏ဆဲလ်များအတွင်းသို့ရောက်သည်နှင့်ဆဲလ်များကိုလိုအပ်သောစွမ်းအင်ကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးကျန်းမာသောအိုမင်းခြင်းအတွက်အရေးကြီးသည်ဟုယူဆရသော NAD + ထုတ်လုပ်မှုကိုကျွေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ DNA ၏သမာဓိကိုထိန်းသိမ်းသောပရိုတိန်းများကိုလှုံ့ဆော်ရာတွင် NAD + သည်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ ဤမျှလောက်များစွာသောဆယ်လူလာလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်၎င်း၏အဓိကအခန်းကဏ္ကြောင့် NMN ၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်ခန္ဓာကိုယ်စနစ်အားလုံးနီးပါးအထိရှိသည်။ အောက်တွင်လူသိများသောဥပမာအချို့ကိုဖော်ပြထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လှုပ်ရှားမှု၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့်ခွန်အားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အရိုးကြွက်သားများကိုအားထားနေရသည်။ အားကောင်းပြီးကောင်းသောအခြေအနေတွင်ရှိနေစေရန်ဤကြွက်သားများသည်ဂလူးကို့စ်နှင့်ဖက်တီးအက်စစ်များကဲ့သို့သောအရေးပါသောစွမ်းအင်မော်လီကျူးပမာဏများစွာကိုစားသုံးရမည်။ NAD + သည်ဤမော်လီကျူးများကို metabolize လုပ်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြွက်သားများသည် NMN ကဲ့သို့သော၎င်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်များမှန်မှန်ထောက်ပံ့ရန်လိုအပ်သည်။
ကြွက်များတွင်လေ့လာမှုများအရ NMN သည်သွေးကြောများခိုင်မာခြင်း၊ oxidative stress၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆဲလ်များဆက်လက်ခွဲဝေနိုင်စွမ်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဇများမည်မျှတက်ကြွစွာပြောင်းလဲခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးဗီဇများပြောင်းလဲမှုကိုပင်ပြောင်းလဲခြင်းကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးတွင်အိုမင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောကျဆင်းမှုများမှကာကွယ်ပေးသည်ကိုပြသခဲ့သည် စကားရပ်။
လေ့လာမှုများအရ NMN ကိုကြာရှည်စွာတိုက်ကျွေးသည့်ကြွက်များတွင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲစွမ်းအင်မြင့်မားစွာဇီဝြဖစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏ NAD + ထောက်ပံ့မှုကျဆင်းလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏ကြွက်သားများ၏ကျန်းမာရေးသည် ပို၍ အရေးကြီးလာသည်။
အနည်းဆုံးသင့်ရဲ့အရိုးကြွက်သားများကအားလပ်ချိန်များကိုရနိုင်သည်။ သင်၏နှလုံးသည်အနားယူစရာမလိုရုံသာမကအလေးအနက်ပြproblemsနာများမဖြစ်စေဘဲ၎င်း၏အရှိန်ကိုများစွာနှေးကွေးစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်နှလုံး၏စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်သည်ကြီးမားသည်။ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်၎င်းသည် NAD + အားလုံးကိုတတ်နိုင်သမျှပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်နှလုံးဆဲလ်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့် NMN ကိုထောက်ပံ့ရန်လိုအပ်သည်။
အဝလွန်ခြင်းသည်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောအခြေအနေများစွာနှင့်ဆက်စပ်နေပြီးကုသရန်အလွန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဆီးချိုရောဂါနှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ် Syndrome ကဲ့သို့သောဆက်စပ်အခြေအနေများအတွက်လွယ်ကူသောဆေးတစ်လက်မရှိပါ။ တသမတ်တည်းလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ကျန်းမာသောအစားအစာများကဲ့သို့သောလူနေမှုပုံစံစသည့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သော်လည်းအနည်းငယ်သာကူညီနိုင်သည်။
Mouse လေ့လာမှုများတွင် NMN သည်ကယ်လိုရီကန့်သတ်ချက် (CR) ၏ရှုထောင့်များကိုတုပသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုကိုဖော်ပြသည်။ CR သည်အိုမင်းခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးကိုများစွာအကျိုးပြုကြောင်းပြသသော်လည်း၎င်းသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာထိန်းသိမ်းထားရန်ခက်ခဲသောအစိုးရဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအလွန်အစွမ်းထက်သောအစားအစာကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲ၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုတုပခြင်းကအကျိုးရှိမည်မှာသေချာသည်။
❺ DNA ကိုပြုပြင်ခြင်း၏ Maintenance ပိုမိုကောင်းမွန်စေ
NMN မှပြုလုပ်သော NAD + သည် sirtuins ဟုခေါ်သောပရိုတိန်းအုပ်စုတစ်စုကိုသက်ဝင်စေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးသက်တမ်းကိုစောင့်ရှောက်သူများဟုယူမှတ်ခံရသည့် Sirtuins များသည် DNA သမာဓိကိုထိန်းသိမ်းရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆဲလ်များကွဲသွားတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ခရိုမိုဆုန်း၏အစွန်းပိုင်းရှိဒီအင်အေသည်အနည်းငယ်သေးငယ်လာသည်။ တစ်ချိန်ချိန်, ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဇကိုဖျက်ဆီးဖို့စတင်ခဲ့သည်။ Sirtuins သည် telomeres ဟုသိပ္ပံနည်းကျသိထားသောအဆိုပါ end-bit များကိုတည်ငြိမ်စေခြင်းဖြင့်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနှေးကွေးစေသည်။ အလုပ်လုပ်ရန် sirtuins သည် NAD + ကိုမှီခိုသည်။ လတ်တလောလေ့လာမှုများအရ NMN ကြွက်များကိုတိုက်ကျွေးခြင်းသည် sirtuins ကိုအသက်ဝင်စေပြီးပိုမိုတည်ငြိမ်သော telomeres များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
❻ mitochondrial ရာထူးတိုးမြှင့်
ရိုးရိုးလေးပြောရရင်ငါတို့ mitochondria မပါဘဲမနေထိုင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဤရွေ့ကားထူးခြားသောဆယ်လူလာအဆောက်အ ဦ များဆဲလ်၏အင်အားကြီးအဖြစ်လူသိများကြသည်။ သူတို့ကငါတို့စားသောအစာမှမော်လီကျူးများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဆဲလ်များအသုံးပြုသောစွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသည်။ NAD + သည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အဓိကကျသည်။ NAD + ဆုံးရှုံးမှုကြောင့် mitochondrial ကွဲလွဲချက်များသည်အယ်လ်ဇိုင်းမားအာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများကိုပင်အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ ကြွက်များတွင်ပြုလုပ်သောလေ့လာမှုများအရ NMN ဖြည့်စွက်ခြင်းသည် mitochondrial ကမောက်ကမဖြစ်မှုအချို့ကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့သည်ဟုပြသခဲ့သည်။
How LOng Does It Take To See Eမင်္ဂလာပါ Of NMN ?
AASrawNMN အမှုန့်သည်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းသင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ NMN အဆင့်ကိုတိုးပွားစေပြီး NAD + အဆင့်ကိုမိနစ် ၆၀ အတွင်းတိုးပွားစေသည်။ သို့သော် NAD + သည်သင်၏ဆဲလ်များကိုပြန်လည်နုပျိုစေဖို့အပတ်အနည်းငယ်ကြာသည်။
၂ ပတ်မှ ၃ ပတ်အတွင်းပိုမိုနုပျိုသည်ဟုခံစားရသည်။ လအနည်းငယ်အသုံးပြုပြီးနောက် NMN ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားနိုင်သော်လည်းရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းသင်ကွဲပြားမှုကိုသင်ခံစားရပြီးပြီဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် AASraw ၏ NMN ၏ပြောင်းလဲခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသင်တွေ့ကြုံခံစားလိုပါကယခုတွင်သင်၌ထူးခြားသောအခွင့်အလမ်းရှိသည်။ အကောင်းဆုံးအပိုင်းလား။ သင်သည်မည်သည့်စွန့်စားမှုမျှမယူရန်လိုအပ်သည်။ AASraw ၏ NMN ကိုစိတ်ကျေနပ်မှုအာမခံချက်တစ်ခုဖြင့်လွှမ်းခြုံထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်သင်၏ NMN ကိုသင်ချစ်မြတ်နိုးရန်အလွန်သေချာသောကြောင့်သူတို့သည်သင့်အားအာမခံချက်ပေးလိုကြသည်။
မည်သည့်အတော်လေးသစ်ကိုအတူ နောကျဆကျတှဲဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိသည်။ ယခုအချိန်အထိသိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများသည်ဤဖြည့်စွက်ဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်နွှယ်သည့်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာသို့မဟုတ်အပြီးသတ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုမပြသပါ။
nikotinamide mononucleotide နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ခုတည်းသောခိုင်မာသည့်တိုင်ကြားချက်သည်ထိရောက်မှုတွင်ရှေ့နောက်မညီမှုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဖြည့်စွက်အသစ်၏ဖွံ့ဖြိုးဆဲအဆင့်တွင်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီဖြည့်စွက်ဆေးကိုသောက်ရန်သင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်၊
Is NMN ခetter Than NAD +?
နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် NAD + မော်လီကျူးများသည်ကြီးမားစွာကြီးလွန်းပြီးတိုက်ရိုက်ယူရန်မလို၊ NMN ကဲ့သို့ရှေ့ပြေးပုံစံဖြင့်ကြီးပြင်းရန်လိုအပ်သည်ဟုယူဆခဲ့ကြသည်။ မကြာသေးမီက NAD + သည်သွေး - ဦး နှောက်အတားအဆီးကိုဖြတ်ကျော်သွားပြီးသွေးအားဖြင့်ထပ်မံခေါ်ဆောင်သွားပါက hypothalamus သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ဤဂလင်းတွင် NAD + အဆင့်များကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုထိန်းချုပ်သောကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုအကျိုးပြုသည်။ ၎င်းသည်အလားအလာရှိနိုင်သည် နောကျဆကျတှဲ hypothalamus အတွက် NAD + အဆင့်လျော့နည်းသွားသောကြောင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်မမှန်မှုများရှိသူများကိုကူညီရန်။
NMN သည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်ရှိဆဲလ်များအတွင်း NAD + အဆင့်များကိုမြင့်တက်စေပြီးသင်၏ NAD + အဆင့်များကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အိုမင်းခြင်းနှေးကွေးစေခြင်းတို့အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ဖြည့်စွက်ချက်ဖြစ်သည်။
Nicotinamide mononucleotide (NMN) သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိသဘာဝဒြပ်စင်ဖြစ်ပြီးနီကိုတင်မိုင်ဒင်ဒင်နူကူလိုတိတ်ဟုခေါ်သောအခြားအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ NMN နှင့် NAD နှစ်ခုစလုံးသည်အိုမင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကာကွယ်ရာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ အဓိကအားဖြင့် NAD သည်သင်ရလေလေ၊ သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည် NAD ထုတ်လုပ်ရန်အလားအလာနည်းလေလေဖြစ်သည်။ NMN ဖြည့်စွက်စာသည်ကြွက်များကစားသောအခါအူသိမ်ထဲ၌ NAD ကိုချက်ချင်းလှုံ့ဆော်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရလဒ်အနေဖြင့်ဖြည့်စွက်ချက်သည်“ လူငယ်စမ်းရေတွင်း” ကိုတီထွင်ခဲ့ပြီးခန္ဓာကိုယ်၏အိုမင်းခြင်းဖြစ်စဉ်သည်နှေးကွေးပြီးပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားသည်။ လေ့လာမှုများကအိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်၏တရားဝင်မှုကိုသက်သေပြရုံသာမကဘဲ NMN ဖြည့်စွက်ဆေးသည်ကင်ဆာ၊ နှလုံးနှင့်ဆီးချိုစသည့်အခြားရောဂါများကိုကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်ကုသရန်လည်းကူညီနိုင်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်သိပ္ပံပညာရှင်အုပ်စုတစ်စုသည်လူသားများနှင့်ပထမဆုံးသောလက်တွေ့လေ့လာမှုကိုအပြုသဘောသက်ရောက်မှုများစတင်ခဲ့သည် NMN ဖြည့်စွက်ယူပြီး။ NMN ၏ထိရောက်မှုသည်အစောပိုင်းအဆင့်တွင်ရှိနေသော်လည်းဖြည့်စွက်မှု၏ထိရောက်မှုကိုအစီရင်ခံစာများကပိုများလာသည်။
NMN ဖြည့်စွက်မှုကိုအွန်လိုင်းမှ ၀ ယ်ရန်သင်ဆုံးဖြတ်သောအခါ၊ NMN နှင့် NAD + အကြောင်းပိုမိုဆောင်းပါးများကိုဖတ်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အဆင်ပြေသည်၊ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်၊ ၎င်းကိုသင်ယူသောအခါနှင့် NMN သောက်သုံးခြင်း၊ သင့်အပေါ်မည်သည့်အန္တရာယ်ရှိသည်ကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည်။ အနာဂတ်၌ NMN အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့နောက်သို့လိုက်ရန် Weclome ။
 Lautrup S၊ Sinclair: D et al ။ ဦး နှောက်အိုခြင်းနှင့် Neurodegenerative Disorders အတွက် 2019. NAD + ။ ဆဲလ်ဖြစ်ပျက်မှု 30,630-655 ။
 Zhang, H. , 2016 ။ NAD + repletion သည် mitochondrial နှင့်ဆဲလ်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။ ကြွက်များတွင်သက်တမ်းပိုစေသည်။ သိပ္ပံ 352, 1436-1443 ။
“ NMN နှင့် NR - ဤ ၂ NAD + ရှေ့ပြေးများအကြားခြားနားချက်များ” ။ www.nmn.com 2-2021-01 ရယူရန်။
 Imai, အက်စ်, & Guarente, အယ်လ် 2014. NAD နှင့်အိုမင်းခြင်းနှင့်ရောဂါအတွက် sirtuins ။ ဆဲလ်ဇီဝဗေဒအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း, 24 (8), 464-471 ။
 Braidy၊ CK Lim၊ R.Grant, BJ Brew နှင့် GJ Guillemin တို့ဖြစ်သည်။ Multiple နဗ်ကြောဖွဲ့ရောဂါအတွက်ရောဂါသင်တန်းမှတဆင့် 2013 ခုနှစ်သွေးရည်ကြည် Nicotinamide Adenine Dinucleotide အဆင့်ဆင့်။ ဦး နှောက် Res 1537: 267-272 ။
 Prolla, T. , Denu, ဂျေ ၂၀၁၄ ။ အသက်အရွယ် - ဆက်စပ် mitochondrial ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက် NAD ချို့တဲ့။ ဆဲလ် metabolism, 19 (2), 178-180 ။
 Fletcher RS, Lavery GG (အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈) ။ "NAD + ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင် nikotinamide riboside kinases ထွက်ပေါ်လာခြင်း" မော်လီကျူး Endocrinology ၏ဂျာနယ်။ 2018 (61): R3-R107 ။ Doi: 121 / JME-10.1530-18 ။ PMC 0085. PMID 6145238 ။
1020 Views စာ
သင်က Pregabalin အကြောင်းသိထားသင့်အရာအားလုံးကို Nootropic Pramiracetam-AASraw ကိုသိရန်မိနစ် ၃၀